Sida uu qabo sharciga Finland, shaqo-bixiyuhu waa in shaqaalihiisa oo dhan u fidiyaa daryeelka caafimaadka shaqaalaha. Ujeedada daryeelka caafimaadku waa in la hortago jirrooyinka iyo shilalka shaqada la xiriira, horumarinta ammaanka goobta shaqada iyo in gacanta lagu hayo caafimaadka shaqaalaha inta ay mihnadda shaqada ku jiraan oo dhan.
Daryeelka caafimaadka shaqada waxaa xaq u leh dhammaan
Ka sokow daryeelka ka hortagga ah ee caafimaadka shaqaalaha, shaqo-bixiyuhu waa in uu shaqaalihiisa u qabanqaabiyaa sidoo kale adeegyada daryeelka bukaanka. Daryeelka caafimaadka shaqaalaha waxaa suurtogal ah inaad hesho adeega kalkaaliyaha caafimaadka, kan dhakhtarka caafimaadka shaqaalaha iyo adeegyada caafimaadka shaqaalaha ee dhakhtarka cilmi-nafsiga. Sida badan halkaas waxaa sidoo kale ka shaqeeya masaajotoore. Adeegyada dhakhaatiirta khaaska ah sida badan kuma jiraan daryeelka caafimaadka shaqaalaha. Shaqo-bixiyuhu waa in uu kuu sheegaa, adeegyada iyo taageerada aad ka heli karto daryeelka caafimaadka shaqaalaha.
Xuquuqda adeegyada daryeelka caafimaadka shaqaaluhu ma taabanayso qoyska qofka shaqaalaha ah.
Daryeelka caafimaadka ujeedadiisu waa horumarinta caafimaadka iyo awoodida shaqada iyo wada shaqaynta goobta caafimaadka.
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka shaqada waxaa saaran waajibka ilaalinta sirta. Uma sheegayaan arrimahaada shaqo-bixiyahaada haddii aadan adigu ogolaanshiyo u siinin. Si kastoo ay ahaataba daryeelka caafimaadka shaqadu waxay shaqo-bixiyahaada siin karaan qiimeyn ku saabsan inaad shaqada sii wadi karto caafimaadkaada dartiis iyo inkale.
Kela ayaa qayb ka mid ah kharashka kaga baxa daryeelka caafimaadka shaqaalaha u soo celineysa shaqo-bixiyaha iyo ganacsadaha, haddii ay lagama maarmaan yihiin kharashkuna uu caqligal yahay.
Macluulaad la xiriira daryeelka caafimaadka shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyöterveyslaitos
Maluumaad la xiriira daryeelka caafimaadka shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Daryeelka caafimaadka shaqaalahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Sharciga daryeelka caafimaadka shaqadaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Lacag maalmeedka jiradaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa